Doctor Magaisa Votarisirwa Kuradzikwa kuZimbabwe
Doctor Alex Magaisa vakagara pechigaro chechipiri kubva kuruboshwe
Gweta raive nemukurumbira Doctor Alex Magaisa avo vakashaya nemusi weSvondo kuBritain vanonzi vari kutarisirwa kunoradzikwa kuZimbabwe asi pachiri kugadziriswa mapepa ekuti mutumbi wavo utakurwe.
Imwe hama yavo Amai Esteri Magaisa vaudza bepanhau reZimLive kuti hurongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mashoko aya atsinhirwawo nemutauriiri wemhuri VaGift Kugara vari kuBritain vati mumashoko kuvatori venhau vari kugadzirisa nyaya yehurongwa hwekuradzikwa kwavo.
Doctor Magaisa vakamboitawo chipangamazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai munguva yehurumende yemubatanidzwa. Vakabatsirawo kunyora bumbiro remutemo idzva ra2013.
Vaidzidzisawo paUniversity of Kent kuBritain. Vachinyora padandemmutande rechikoro ichi reKent Online, mukuru mubazi rezvemutemo maidzidziswa naVaMagaisa Amai Lydia Hayes vati mufi aive nechipo chekunyora nekudzidzisa.
Vati kwemakore gumi nemashanu avadzidzisa pachikoro apa, vakaratidza kuti munhu aive nenjere dzakapinza. Vanhu vakawanda pachikoro apa vari kubata maoko vachirumbidza mabaas emufi.
Mumwe wevakakura naDoctor Magaisa vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachidzidzisa paTswane University, Muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba uye munhu aive nechido nenyika yake.